कोभिड १९ को असर! नेपाली खुकुरीको माग घटेसँगै उद्योगी र व्यवसायी पलायनहुने अवस्थामा - Mero Mechinagar
गृह अर्थ / वाणिज्यकोभिड १९ को असर! नेपाली खुकुरीको माग घटेसँगै उद्योगी र व्यवसायी पलायनहुने...
कोभिड १९ को असर! नेपाली खुकुरीको माग घटेसँगै उद्योगी र व्यवसायी पलायनहुने अवस्थामा
काँकरभिट्टा, ३० चैत÷ अधिकाँश विदेशी ग्राहकको रोजाईमा परेको नेपाली खुकुरीको व्यपार पछिल्लो समय खस्किर्दैं गएको छ । नोवल कोरोाना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणका कारण एकवर्षअघिदेखि थला परेको खुकुरीको व्यपार अझै लयमा फर्कन सकेको छेन् । जस्को कारण अहिले पनि लाखौं लाखौं रुपैयाँका खुकुरी व्यवसायीका गोदाम र पसलमा थन्केका छन् । बजारमा खुकुरीका ग्राहकसँगै खुकुरीको माग घट्दै गएपछि खुकुरी उद्योगदेखि विक्रेतासमेत विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको झापा मेचीनगरका खुकुरी व्यपारीहरुको भनाई छ ।
झापाको मेचीनगर—६ स्थित काँकरभिट्टा बजारमा झण्डै दुईदशक अघिदेखि खुकुरी विक्री गर्दैं आउनुभएका न्यू संगीता जनरल स्टोर्स घिमिरे खुकुरी पसलका सञ्चालक दीपक घिमिरे कोभिड १९ का कारण खुकुरी विक्री नराम्ररी प्रभावित बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार एकवर्षअघिसम्म जसरी बजारमा खुकुरीको माग थियो अहिले त्यो शुन्यमा झै छ । अहिले पनि आफ्नो पसलमा १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका खुकुरी थन्किएको उहाँको भनाई छ । बजारमा खुकुरीको माग घट्दो क्रममा रहेपछि अहिले उद्योगबाट खुकुरी माग गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । एउटा खुकुरीको मुल्य ५ सय रुपैयाँदेखि सुनका दाव भएका वा सुनको जलप लगाएका खुकुरी निक्कै महंगा पनि हुने व्यवसायी घिमिरेको भनाई छ ।
घिमिरेको पसलमा भोजपुरे, सिरुपाते, चैनपुरे, खुकुरीहरु ग्यारेन्टीका साथ खुद्रा तथा होलसेल मुल्यमा विक्री हुने गरेको थियो । सुनसरीको धरान नेपालमै सबैभन्दा बढी खुकुरी उत्पादन हुने ठाउँ हो । यतिखेर धरानमा समेत अहिले खुकुरीको माग घट्दै गएपछि खुकुरी उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । यो सँगै भोजपुर, धनकुटा, चैनपुर, पाचथर, तेह्थुमसहित झापा र मोरङ जिल्लाका केही केही ठाउँमा खुकुरी उत्पादन हुने घिमिरेको भनाई छ । नेपालमा उत्पादन भएको विभिन्न जातका खुकुरी हङकङ,अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, रसिया, चीनमा खपत हुने गरे तापनि पछिल्लो समय नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण जारी लकडाउन र सीमानाकामा आवतजावतमा कडाई भएका कारण खुकुरीको माग ह्वात्तै घटेको उहाको भनाई छ । यो सँगै भारतको दार्जिलिङ्ग, खर्साङ्ग, कालेम्पोङ्ग, मिरिक, सिक्किम, शिलीगुडीलगायतका स्थानबाट समेत नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुको रोजाईमा समेत नेपाली खुकुरी पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले त्यस्ता ग्राहकको संख्या झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढिले कमि आएको छ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका खुकुरी उद्योगहरुबाट विदेशमा ७० देखि ८५ प्रतिशत खुकुरी निर्यात हुने भएपनि अहिले १० देखि १५ प्रतिशतमात्र खुकुरी विक्री हुने गरेको बताईएको छ । खुकुरी विक्री हुने समयभनेकै दशै. तिहारपछिदेखि जेठ महिनासम्म हो । अहिले खुकुरी विक्रीको सिजन भएपनि यसका व्यवसायीहरु निक्कै फूसुर्दिला बनेको बताईएको छ ।
भारतीय सेना पुलिस कार्यरत तथा अन्य रोजगारीमा भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेका नेपालीहरु दशैं तिहारलगायत अन्य चाडपर्वका बखत घर फर्कने क्रममा धेरैले खुकुरी किन्ने गरेका थिए । पुनः भारत फर्कने समयमा साथीहरुलाई उपहारको सामाग्रीमो रुपमा दिने प्रचलनले पनि खुकुरी खरीद गर्ने गरेका थिए । विभिन्न विदेशी पर्यटकहरुले समेत गोरखालीको चीनोको रुपमा सजावट र साथीहरुलाई उपहारको सामाग्रीको रुपमा दिने प्रचलनले नै खुकुरीको माग अत्यन्तै रहेको थियो । कोभिड १९ का कराण पछिल्लो समयमा विदेशी पर्यटकको आगमनमा शुन्य रहेकाले खुकुरीको समेत कम हुदै गएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
अघिल्लो लेखमानेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति यूके भेरियन्ट, साना बालबालिकाको लागि बढी जोखिमपूर्ण
अर्को लेखमाकाँकरभिट्टा र भद्रपुर नाका सिल